Imvula yamanzi ngesiJapane izwakala njenge "taki", okuhunyushwa ngokuqondile kusho "idrako yamanzi". Kungenxa yalesi sidalwa semfihlakalo ukuthi amaJapane abaneminyaka eminingi ayazi ukuthi imifudlana yamanzi iwa kusukela ekuphakameni okukhulu namaqembu e-steam nomsindo omkhulu.
EJapane kunezingcingo ezingaphezu kwezingu-2 000 ezinokuphakama okungenani ama-5 m. Uzobona isithombe samanzi asemanzini adumile eJapane ngezansi.
Amanzi aphezulu kakhulu
Lezi zimpophoma ezintathu ezihlaba umxhwele zibheke kanje:
I-Hannock yiyona imvula ephakeme kunazo zonke ezweni lonke nase-Asia. Kutholakala e-Toyama Prefecture, "idrako yamanzi" inamamitha angu-497 ubude futhi i-88th emhlabeni ukuphakama ngamanzi. Nokho, ubukhulu bayo ngisho naseJapane kunemibandela. Lokhu kuchazwa ukuthi uHannoki usasebenza ezinyangeni ezine kuphela ngonyaka: kusukela ngo-Ephreli kuya kuJulayi, lapho iqhwa eliqhakazile eMagagahara.
I-Daky eyisikhombisa iyimvula yamanzi ephakeme eJapane. Ukuphakama kwalo kuyi-370 m. Igama elithi Simeo lihunyushwe ngokuthi "ukuhlwithwa". EmaJapane, umsindo wamanzi awelayo kufana nemisindo ekhishwe umonki emthandazweni kuBuddha. I-Simeo Dacians nayo ibizwa ngokuthi amawele kaHannock, ngoba kokubili lezi zivunguvungu ziwela emfuleni owodwa, futhi ngokumelene nendawo entabeni amanzi abo akhumbuza incwadi yesiLatini V.
Hagoromo-kodwa - okwesithathu amanzi ephakeme eJapane (270 m), enye yezindawo ezivakashelwa kakhulu esiqhingini saseHokkaido. Izinyathelo ezingu-7 uHagomo-kodwa namanje ukhumbuza umdanso waseJapan othi "inkanyezi yenkanyezi," obhekwa njengelungelo lokudla ilayisi.
Ama-waterfalls amahle kakhulu
Yiqiniso, lokhu kuhlukaniswa kunemibandela, kodwa amaJapane ngokwabo kulesi sigaba afaka amaphupho alandelayo:
Nati, kodwa namanje - i-waterfall, esesifundeni se-Kia, esifundeni saseJapane Wakayama. Ukuphakama kwalo kungu-133m, kanti amanzi awelayo adala i-pool yamamitha ayi-10 ezinyaweni. Kwakhiwa amasonto amabili eduze kweNati: i-Hiro-jinja - i-Shinto ethempeli neSeiganto-ji - Buddhist ithempeli, lapho ipaki lokubona lihlomele izivakashi. Ukugeleza okukhulu kwezivakashi eJapane eduze kwe-waterfall ka Naty kubonakala ngoJulayi 14 - umkhosi womlilo, lapho umbukiso oqhakazile khona ukuhlanzwa ngomlilo wendlela eya emanzini.
I-Kagon iyimvula eyaziwa kakhulu kunazo zonke eJapane, ohlwini lwahlu lwe-UNESCO. E- Nikko National Park yaseJapane , amanzi e-Kagon aphezulu ngamamitha angu-101. Ngosizo lokuphakamisa okukhethekile ngemali encane, i-Cagon ingabonakala eduze. Futhi ngemva kokujabulela ubuhle, vakashela indlu yetiyi ngaphansi komfula. Ebusika (ngoNovemba-Mashi) I-Kegon igxuma futhi imelela umhlaba wezintandokazi ezingashiyi muntu ongenandaba.
I-Fukuroda-kodwa - imvula yamanzi kunazo zonke esifundeni sase-Ibaraki. Ukuziqhenya isakhiwo salo: Fukuroda iqukethe amatshe, futhi amanzi egeleza nabo ihlanganisa amachibi amancane. Ebusika, imvula yamanzi kanye nemizimba yamanzi iqhwa. Ukuze kube lula izivakashi, onjiniyela baseJapane edwaleni bakhela i-elevator, lapho ungakhuphukela khona esigabeni esiphezulu seFukuroda futhi ujabulele umbono wamanzi awela phezulu.
Amanzi asemanzini angavamile
Lesi sigaba sihlanganisa izinto ezilandelayo:
I-Furape-kodwa- ephawulekayo yukuthi ayikho imizimba yamanzi esiseduze, kusukela lapho amanzi angaphinde agcwalise khona. I-jet ihlasela ngqo emhlabathini futhi, ewela emifuleni eminingi, iwela phansi entabeni. Kukhona iFurape futhi igama lesibili yizinyembezi zikaMaiden.
I-Camuyvaca ibuye imvula yamanzi, umthombo walokho okushisayo emithonjeni yamaminerali ashisayo . Ezinyathelweni ze-waterfall zakhiwa amachibi, futhi isiteji esingaphansi, ipholile amanzi. Ngendlela, amanzi aseKamuyvakka kubhekwa njengokwelashwa, kanti amaJapane ayajabula ukugeza emzimbeni wamanzi awenzayo.
I-Sönjüdo iyimvula enkulu kunazo zonke ngaphansi komhlaba eJapane, eseseminye yemihume yaseGifu Prefecture.
Zonke izimpophoma ezichazwe ngenhla zivela emvelweni. Kodwa amaJapane ayakuthanda amanzi awelayo ukuze athulwe inombolo yawo, ekwakheni amaphuphu okufakelwa emapaki ngisho nasezikhungweni zokuthenga.
Imithetho yaseNingizimu Korea
I-Nepal - izindawo zokubhuka
Yini ongayikhipha e-Indonesia?
Ukuvakasha eNingizimu Korea
Izindawo zokuhlala ze-UAE
Uhlobo luni lwesithelo umntwana angaba nalo ezinyangeni ezingu-9?
Iyini isimiso seshukela egazini?
Yini ongayenza ne-Maldives?
I-polymyositis - izimpawu, ukwelashwa
Izithombe ezingu-20 ezivela ochungechungeni lwe "amaqembu ahamba kahle kangangokuba akakhohlisayo ukukhumbula"!
Klebsiella - ukwelashwa
Indwangu ebomvu ngekhola
I-agar-agar - ukwakheka
Ishidi lokusilika - izithombe ezingu-36 zamamodeli emfashini abesifazane nabamantombazane
Kusuka othandweni ukuzonda ...
Indlela yokukhulisa ama-oats?
Iphi i-snowdrops ekhulayo?
Ikhekhe le-Cherry - iresiphi
Izinkanyezi ezingu-15 ezingabonakali ukuthi zisebenzise izinsizakalo zomama wokubeletha!
Ukuvuvukala kwesibindi sciatic - izimpawu kanye nokwelapha
U-Amal Clooney okhulelwe uhlasela izihlobo nabangane ngokuvumelana kwakhe